Ingabe abefundisi nabadala ngempela babekwe nguNkulunkulu? Ingabe ukwamukela nokulalela abefundisi nabadala kumele ukuthobela komuntu nokumlandela uNkulunkulu? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-04-08 18:53:49 121
Okwedlule： Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu?
Okulandelayo： Yini umphumela womuntu okholwa kuNkulunkulu enkolweni kodwa sibekelwe ukudideka nokulawulwa ngabaFarisi nomphikukristu? Ingabe umuntu angasindiswa nguNkulunkulu uma ekholwa kuNkulunkulu ngale ndlela?